nangchitsu's Likes - Myanmar Network
Back to nangchitsu's Page
Election ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂) ဒီတပတ် English Learning: America Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ တင်ပြပေးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ to vote with your feet, throw in your towel, underdog နဲ့ press the flesh တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာ… Discussion Election ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂)2Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (It's… It's beyond me (ဒို့တော့ ဥာဏ်မမီဘူး။) နားမလည်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောချင်ရင် it's beyond me လို့ ပြောနိုင်တယ်။ It's beyond me where Meg gets all that money to spend on clothes.Meg တစ်ယောက် ဘယ်က အ၀တ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (It's… 153 Likes အရိုင်းစကား (၁) - (၂) - (၃) - (၄) အရိုင်းစကား (၁) စကားပြောဆိုရာမှာ မည်သည့် ဘာသာ စကားနဲ့ ပြောဆိုသည် ဖြစ်စေ ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်း မဖြစ်စေဖို့ ဂရုစိုက် ပြောကြရပါတယ်။ ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်း ပြောခြင်းဖြင့် ပြောဆိုခံရသူဟာ ယဉ်ကျေးမှ… Discussion အရိုင်းစကား (၁) - (၂) - (၃) - (၄) 85 Likes အစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်ကျင်းပရန် အင်္ဂလိပ်စကား အ… အလုပ်လုပ်သူတိုင်း အစည်းအဝေးတွေနဲ့ကင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အစည်းအဝေးကိုပါ မလွဲမသွေ ဦးဆောင်ရမှာပါ။ အစည်းအဝေးကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဦးဆောင်ကျင်းပနိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို အဖွဲ့အစည်းတွေက အမျာ… Discussion အစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်ကျင်းပရန် အင်္ဂလိပ်စကား အ… 154 Likes အင်္ဂလိပ်စာအပြောင်းအလဲများ (English Moves Furt… ၁၅ ရာစု အကုန်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားက နိုင်ငံသုံးဘာသာဖြစ်လာပါပြီ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေ ပိုပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်လာပါတယ်။ သို့သော် ယနေ့သုံးနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ တူလာတာကတော့ ၁၆ ရာစုကျမှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၂၄ ခုနှစ… Discussion အင်္ဂလိပ်စာအပြောင်းအလဲများ (English Moves Furt… 39 Likes Already and All ready (မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါ… Already and All ready already ဟာ adverb ဖြစ်ပြီး “ပြီးနှင့်ပြီ၊ (ရောက်၊ ရှိ၊ သွား )နှင့်ပြီ” လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ all ready ကတော့ “အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ အသင့်ဖြစ်နေပြီ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဥပမာ. (၁) We… Discussion Already and All ready (မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါ… 37 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Let’… Let’s see (စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်) စဉ်းစားနေတယ်၊ မေ့နေလို့ ပြန်အစဖော်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ let's see ကို သုံးနိုင်တယ်။ You say that you are looking for accommodation for the night. Let's see.… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Let’… 208 Likes Love စကားလုံး၏ လွဲမှားမှုများ လွဲမှားမှုတွေ ။ “ချစ်သူ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “lover” လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲလိုပဲ လူတော်တော်များများသုံးနေကြတယ်။ love ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ချစ်တယ် တဲ့။ ဒါတော့ လူတိုင်းသိမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ word/v… Discussion Love စကားလုံး၏ လွဲမှားမှုများ 396 Likes အင်္ဂလိပ်စကားပြောပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ (အ… [Zawgyi] ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းကိုမေးလိုက်။ ဘာလုပ်နေလဲ “အင်္ဂလိပ် စပီကင် တက်နေတယ်” ဟူသည့်အဖြေကို ညံညံစီစီ ကြားနေရသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၏အရေးကြီးပုံကို လူတိုင်း သဘောပေါက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကလို ကျွန်လုပ်ချင်… Discussion အင်္ဂလိပ်စကားပြောပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ (အ… 325 Likes